Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Ben Davies Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Ben“. Anyị Ben Davies Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a metụtara ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ya mara mma na ụdị egwuregwu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Ben Davies 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Mmalite na ndụ ezinụlọ
Malite, aha ya bụ Benjamin Thomas Davies. A mụrụ Ben Davis na 24th nke Eprel 1993 na nne ya, Eryl Davies (onye na-elekọta ụlọ) na nna, Alun Davies (onye injinịa mgbapụta) na obodo Welsh nke Neath, United Kingdom.
Ben si n'ezinụlọ nwere obi ụtọ bụ ndị nweworo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge nile nke ndụ ha na-ahụrịta onwe ha n'anya.
Dị ka e gosiri na foto dị n'elu, Ben etoliteghị na ezinụlọ Davies. Ya na nwanne ya nwanyị mara mma toro Hana.
Hana maara nke ọma banyere ọrụ nwanne ya nwoke site na mmalite. Mgbe Ben bu nwata, akpado ya “nwa na-enwe obi ụtọ”Nke nna ya na mama ya. Ben n'oge ọ bụ nwata anaghị ahapụ ịgba bọl na egwuregwu ndị ọzọ ọkachasị ndị nkịtị na Wales.
N'ịbụ onye na-echegbu onwe ya, Ben na-egwu ntụrụndụ n'oge agụmakwụkwọ elementrị mgbe football na cricket na-apụ n'ụlọ akwụkwọ, karịsịa n'oge okpomọkụ. Football bụ nọmba ya 1 na Rugby bụ egwuregwu ya ọzọ a họọrọ. N'adịghị ka ụmụ amaala Welsh ga-eme, Ben họọrọ football karịa nke Rugby ka ọ họọrọ egwuregwu. Nke a hụrụ ya n'afọ 2001 na-edebanye aha ya n'akwụkwọ edemede Swansea football, oge ọ bụ nanị 7.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Ibu Denmark kpoo Job
Obere oge otu afọ mgbe Ben debanyere aha na Swansea, mkpebi kpebiri maka ya ka ọ ghara ịga n'ihu na ụlọ ọrụ Welsh. Nke a bịara n'otu oge ezinụlọ Davies etinyela uche ha na Denmark.
Nna Ben, Alun Davies nwetara ọrụ ọhụrụ dị ka injinia na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọtụtụ ijeri dollar Danish aha ya bụ Grundfos. Nke a hụrụ ka ezinụlọ Ben Davies na-akwakọba ma hapụ Wales gaa Denmark. Na Denmark, ha biri n’obodo mara mma nke Viborg.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Mmalite Ndụ na Viborg
Mgbe ezinụlọ Ben Davies kwagara Viborg, ha ghọrọ ndị agbata obi na Torben Primsø, onye na-eto eto bọọlụ ntorobịa na ọwụwa anyanwụ Viborg.
N'oge ahụ, Torben Primsø nwere ogige ntụrụndụ nke dọtara obere ụmụ nwoke gụnyere Ben bụ onye so n'etiti ụmụntakịrị nwoke ndị ọzọ na-egwu bọl na-eju ndị agbata obi ha nke Danish anya.
The Dilemma: N'agbanyeghị na Ben na-aga ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Swansea n'oge ahụ na Wales ma na-agbakwa bọl n'ubi Torben, ndị mụrụ ya enweghị mmasị na ọrụ ahụ. Nke a bịara mgbe Eryl na Alun chọtara ohere ka mma maka nwa ha nwoke ịgbaso Denmark. Ebe ọ bụ na Ben nwekwara onyinye agụmakwụkwọ, ndị mụrụ ya chọrọ ka ọ bụrụ dọkịta ma ọ bụ injinia n'ihi na ọzụzụ nwere ohere kachasị na mba ahụ.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Nmegide ahụ
Ka nrụgide ịhapụ football iji gaa n'ihu ịrịgo, Torben Primso mere ngwa ngwa iji zọpụta Ben dara ogbenye. O kwusiri ike na nne na nna Ben kwere ka nwa ha jiri football na-achọsi ike ịghọ ọkachamara n'egwuregwu football. Accrediting Ben, Primso kwukwara;
Ben nwere ọchịchọ ma nwee ezigbo ụkwụ aka ekpe. Ọbụna gị talent apụtaghị nke ọma, Ben nwere mkpali ịghọ pro.
Ndị nne na nna Ben mechara hapụ ọdịmma onwe ha na nhọrọ nwa ha nwoke. Nke a kpaliri Torben Primso ịme ndokwa maka ịgba bọl maka Ben na ndị enyi ya. Ben dị afọ 10 n'oge ahụ ya na ndị enyi ya meriri ọnwụnwa ha. Ha debara aha ha na ngalaba ntorobịa ntorobịa na Viborg FF. Omume a mere ka mmekọrịta dị n'etiti Torben na ụmụ nwoke dịkwuo ike ka ọ ghọrọ onye nkụzi ha.
Foto dị n'elu gosiri Ben Davies na ndị enyi ya nọ ọdụ n'elu ihe ndina dị n'akụkụ Torben ka ha na-ele ya greenblock na televishọn ya.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - The New Football Life
Ben mụtara otu esi etinye onwe ya na igwu bọọlụ ya na mba ọzọ ọbụlagodi na ọ chere ihu oyi na ogologo oge oyi. Na Denmark, ọ na-egwu bọl n'ime ụlọ, karịsịa n'oge oke oyi.
N'ihi ahụmahụ ya gara aga na Swansea, mmepe teknụzụ Ben mere ngwa ngwa. Ọ mụtara otú e si eme njikwa bọl, otu njikọ abụọ na otu agbakwunye agbatịkwu ọsọ ya. Nke a mechara kwụọ ụgwọ ka ọ na-eduga ndị otu ya iji merie nrite ọla edo mbụ ya. N'okpuru ebe a bụ Ben nwere obi ụtọ na nrite ọla edo n'olu ya.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Nweghachi nke Welsh
Dị ka ndị nna Ben Davies hụrụ na nwa ha ga-enwe ihe ịga nke ọma n'egwuregwu football, ha chere na ha ga-alaghachi United Kingdom ebe ndị ọkachamara ga-abịa na football.
Laghachi Wales abụghị naanị maka football kamakwa maka agụmakwụkwọ. Mgbe na Denmark, ma Ben na nne na nna ya kwetara na ọ ga-emecha mezue GCSE tupu ya echee football ihu kpamkpam. Ben bịanyere aka na Swansea ịmụ ọrụ mbụ ya mgbe ọ dị afọ iri na isii, oge ọ rụzuru GSCE nke ọma na asụsụ Welsh Ysgol Gyfun Ystalyfera.
N'afọ 2012 mgbe ọ dị afọ 19, Ben kwalitere ndị otu Swansea. N'afọ ahụ, ọ ghọrọ onye na-amalite mgbe niile maka otu.
Ben ngwa ngwa ngwa ngwa bu onye otutu ndi n'egbo n'egwuregwu football, ma obughi nwanne ya nwanyi bu Hannah na ndi nne na nna.
“Ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ anyị na-agwakarị m na ọ bụ ihe ijuanya na nwanne m nwoke na-eme nke ọma"
Nwanne nwanyị Ben kwuru, sị. Site na ịrụsi ọrụ ike na ọchịchọ nke imeziwanye mgbe niile, Ben nwere mmasị na ya Mauricio Pochettino onye na 2014 kpọbatara ya na ndị otu ya London, Spurs. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Ndụ mmekọrịta
Ndụ mmekọrịta Ben Davis na-enyere gị aka ịmatakwu ya. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nkasi obi na-akasi obi maka mmadụ inwe onye ọlụlụ ha nwere ike ịtụkwasị obi mgbe niile.
Mmekọrịta dị n'etiti Ben Davies na Kayleigh Elise Hughes abụwo ndị nwere egwurugwu na urukurubụba kemgbe ha hụrụ n'anya n'afọ 2013. Ndị hụrụ ha n'anya si n'otu obodo ahụ, Neath na Wales.
Ben gara maka nwa agbọghọ Welsh na-egosi na ọ nọ n'ụwa. Tupu izute Ben, Kayleigh Elise bụbu onye enyemaka na-ere ahịa na alaka ụlọ ọrụ Zara na Swansea. O mekwara ụfọdụ ihe nlele maka foto Chicproduction.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ nke Na - Ndụ nke Onye
N'ihe ndekọ nke onwe na nke onwe, Ben nwere ntụkwasị obi, nwee ndidi, dị irè, onye ji obi ya niile na-arụ ọrụ ya ma na-akwụsi ike. E wezụga ịbụ onye bara uru na onye nwere ezi ntọala, ọ bụ onye kụrụ ma na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya ugbu a.
Ben mgbe ụfọdụ na-enwe mmasị ịhapụ onye ọ bụla naanị ya na Swansea n'ụsọ oké osimiri iji weghachite ume dị n'ime.
Ọbịaru ezinụlọ nso: N'agbanyeghị na London bi, ezinụlọ Ben na-ahọrọ ịnọ na Wales. Ben ka nọ ezinụlọ ya nso na Wales n'agbanyeghị na ọrụ ịgba egwu ya akpọrọla ya London ka ọ kpọọ na Premier League.
"Ọ na-enwe obi ụtọ ịnọ n'ụlọ ma na-akpachi anya na ezinụlọ ya,"
nne ya, Eryl gwara BBC Radio Wales n'otu oge.
Nri Hobbie: N'ịbụ onye na-abụghị onye ezinụlọ, Ben na-enwe mmasị ịnọgide na-ahụ maka ahụike a site n'ịgba naanị ya na kichin ya. Ọ bụ otu n'ime ndị na-agba ụkwụ ole ma ole esi esi nri nke ọma.
Na-enwe ụgbọala egwu: Ben Davies na N'golo Kante a na-ewere ndị kachasị obi umeala na Premier League. Lee ihe kpatara ya;
Ịhụ ụgbọala ha ma jiri ya tụnyere ya EZIOKWU ndị na-abanye na akaụntụ akụ ha ga-eme ka ị kwenye na arụmụka nke na-ekwu 'Okwukwe n'ime mmadụ ole na ole na-agba bọọlụ ugbu a ka eweghachiri n'ezie !!
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Ben Davies Childhood akụkọ na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.